Kitra – «Chan 2018» : milaza ho vonona hamono baolina betsaka ny Barea | NewsMada
Kitra – «Chan 2018» : milaza ho vonona hamono baolina betsaka ny Barea
Par Taratra sur 15/07/2017
Andrasan’ny rehetra fatratra, rahampitso alahady, ny lalao mandroso, hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy ny Mambas, avy atsy Mozambika. Dingana faharoa eo amin’ny fifanintsanana ho an’ny “Chan 2018”.
Vonona ny Barea de Madagascar, hiatrika ny Mambas avy atsy Mozambika, eo amin’ny fiatrehana ny lalao mandroso, hiadian-toerana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ireo mpilalao tsy matihanina “Chan 2018”, tanterahina any Kenya. Fihaonana hatao rahampitso alahady, etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina.
Niatrika ny fanazarantena farany, omaly, ny ekipam-pirenena malagasy. Nanamafy ireo paikady sy ny fomba hanafainganana ny famonoam-baolina no nifantohana tamin’izany. Tanjon’ny mpilalao ny hamono baolina betsaka, mba hilaminana amin’ny fiatrehana ny lalao miverina, atao any Maputo, afaka herinandro. Nisy fiovana ny mpilalao teo amin’ny Barea de Madagascar satria voatery nijanona i Sampy Avril, noho ny ratra nahazo azy ary nosoloina an’i Lanto, mpilalaon’ny Cnaps Sport, eo amin’ny vodilaharana. Ankoatra izay, nampiana iray ny mpiandry tsatoby, ka nantsoina ihany koa i Damien, avy amin’ny Tana Formation. Salama tsara avokoa ireo mpilalao ary ambony ny toe-tsaina.
Etsy ankilany, tonga omaly tolakandro ny delegasiona mozambikanina, izay miisa 33 ka mpilalao ny 20 amin’izy ireo. Niova fa tsy toy ilay nifandona tamin’ny Barea, tany amin’ny Cosafa, ny firafitry ny mpilalaon-dry zareo. Nambaran’ny mpanazatra azy ireo, fa tsy hiaro tena ny hahatongavany eto, fa haka fandresena ary hamono baolina, na mbola handray ny fihaonana miverina aza, izy ireo.
Marihina fa hanala vela, amin’ny Barea de Madagascar ry zareo Mambas, amin’ity. Na izany na tsy izany, miandry ny mpijery ho tonga maro, hanohana azy ireo, ny mpilalaon’ny Barea, rahampitso, eny Mahamasina.